Imfihlo yeShag Point
Indawo yam ikufutshane kwimisebenzi elungele usapho. Ime kwindlela ezolileyo, iShag Point yimizuzu eli-10 emazantsi eMoeraki kunye nemizuzu engama-45 emantla eDunedin. Indlu ibekwe kumgama oziimitha ezingama-20 ukusuka elwandle kunye nokufikelela emanzini. Ukufikelela kuphantsi kwendlela enokuba ngumngeni, kodwa ifanelekile ukuphonononga amatye. Ii-Orcas kunye namahlengesi ziye zajongwa kwidesika. Amatywina kunye noonombombiya basekupheleni kwendlela. Indawo yam ilungile kumaqabane, kunye neentsapho ezincinci Ngokufanelekileyo zilungele abantu abadala abane.
Indlu inamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokulala lesithathu ukusuka kumgangatho wolwandle. Igumbi lokulala elikhulu linewodrophu kunye needrowa. Igumbi lokulala lesibini lincinci ngaphandle kwe-wardrobe. Le ndlu yayifudula iyindlu yabasebenzi basezimayini xa iShag Point yayinomgodi wamalahle ekupheleni kwendlela. Ukulungiswa kudale indawo yokuhlala ebanzi, ubungakanani begumbi lokulala bubonisa isiqalo esithobekileyo sendlu.
4.88 · Izimvo eziyi-187
Indlela ezolileyo enamatywina ekupheleni kwendlela kunye neentsalela zomgodi wamalahle amadala. Imizuzu elishumi ukusuka eMoeraki kunye neFleur's Restaurant yodumo. Unxweme lwesanti emhlophe lukumgama wokuhamba